Ụbọchị My Pet » 5 Iwu nke Ịbụ a Wingman
emelitere ikpeazụ: oké osimiri. 31 2020 | 2 min agụ
Inwe a tụkwasịrị obi na ọkachamara wingman site gị n'akụkụ nwere ike ikpebi ma ị ga-ahapụ ya na otu nwanyị mara mma ma ọ bụ solo. N'okpuru ebe, anyị weere na nke kacha mma iwu maka ịbụ ndị kacha wingman.
-achị #1: Ọ na-eru nso mbụ, ahọrọ
-eme ihe n'eziokwu, ọ chọrọ obi ike ịgakwuru otu ìgwè ndị inyom na anyị kwurịta ruru ka ihe ize ndụ nke ịbụ ndị gbara ala ma ọ bụ na-eti ya anya. Ọ na-ewe nkà ịgakwuru ndị inyom ụzọ ziri ezi. N'ihi ya mbụ anyị na-achị: onye ọ bụla nke ọma na-eru nso mbụ, ọkọkpọhi akpa oke na ndị inyom.
-achị #2: -Emeso ndị enyi gị nri
Women ịmụta ọtụtụ ihe n'aka chọpụtara karịsịa banyere ndị ha nwere mmasị. Act dị ka ndị enyi gị bụ coolest ndị ị maara. Ọ bụghị nanị na nke a ga-obi ike radiate anya ma a nwaanyị ga-ntabi-aghọ nnọọ ihe dọọrọ mmasị gị. Ditching enyi gị n'ihi nwaanyị ị matara nkeji iri dị na-egosi na ị na-achọsi.
-achị #3: Akwanyere ihe ruru
Ọ bụrụ na enyi gị na-agwa okwu anu gbara iche ọgụgụ ndị inyom, ewere na dị ka a cue ịgakwuru otu na-enyere ghara imegide ruru. Cheta, ọ bụrụ na ị ejedebe ọkụkụ ya anya na otu nwa agbọghọ akpan akpan, ị ka mkpa ịnọ na otu. Ahapụ na na nwaanyị ga-ahapụ gị Ihọd wingman obere nke pụtara na ị nwere okpu. Naanị oge ọ bụ dịkwa mma ịhapụ bụ ma ọ bụrụ na ndị ruru bụ ọbụna. Otú ahụ na ị ma nweta naanị oge ndị inyom mara mma.
-achị #4: -Eme ma na-ekwu ihe enyi gị bụ enweghị ike
A na-achị dị oké mkpa maka wingmen. Chere ruo mgbe enyi gị na-aga ime ụlọ ịwụ ma ọ bụ grabs a ọṅụṅụ na ekwu okwu banyere ya kasị mma àgwà a abụghị kpọmkwem. N'ihi na bonus ihe, anaghị ekwu ozugbo na nwa agbọghọ o nwere mmasị n'ihe. Kọọrọ ya ndị enyi ya na-echere ruo mgbe ha na-ekpeghachi ya.
Iji nyere enyi gị ndidi kwa kpọmkwem, mgbe o yiri ka abalị na-asọfe ala-atụ aro ikpeazụ ọṅụṅụ ma ọ bụ a ije n'elu ụlọ na-enweta na-eju anya.
-achị #5: Act dị ka egwuregwu bụ n'elu
Ozugbo ị na-ahụ na icheku ọkụ n'etiti enyi gị na nwaanyị ọ bụ mmasị na, ịmalite ịkpa àgwà na-ekwu okwu dị ka ha na-ama a di na nwunye. A Usoro nke “Framing”, ga-enwe ihe dị ịtụnanya mmetụta dị ka ndị inyom na-emetụta sub-nkwukọrịta ihe karịrị ihe n'ezie na-ekwu.
Na a na ubi ndu-ya n'aka-, ị dịkwa njikere ugbu a na-enwe ihe ịga nke ọma n'abalị si na obodo.
10 Mbụ Ụbọchị ekike Atụmatụ maka Men
5 Ajụjụ Ndị Ị kwesịrị ịjụ On Mbụ Ụbọchị
Iri Nzọụkwụ na mba a na-akpali akpali Singles Party